Downloads 68 031
Waxay abuureen 02-01-2012
Author: Patrick Le Luyer, waxaa soo cusbooneysiiyay Andreas Rotowski, P3Dv4 la qabsashada Rikoooo http://oldpat.e-monsite.com/
Updated on 01 / 12 / 2018 : U sinaanta diyaarinta vvnNXXX +, bedelida 3-bit gauges. Qalabka baabuurta rakibida ee 4
Updated on 14 / 05 / 2015 : 2.0 - Baabuurta cusub ee VC, Avionic, Nav-GPS, Gawaarida, Muraayadaha, Shidaalka, Shidaalka Shidaalka iyo Gawaarida, Macaamiisha digniinta, Maqnaanshaha TCAS, Nalalka xaaladda Gear, FMC, bogga shidaalka, EICAS, Aragtida VC iyo habka korontada loo shaqeeyo. Waxaa ka mid ah boogaha ugu dambeeyay ee Bobambilo.
Model abuuray Gmax la qol iyo caadada dhawaaqa dalwaddii, laba repaints ka mid ahaa: Royal Air Force, Faransiis Air Force, Jarmal Air Force, Cam. Waxaa ka mid ah updates of model dayuurada iyo views camera daray ka 22 2015 april. Faahfaahinta waxaad ka heli kartaa http://oldpat.e-monsite.com
In dunida dhabta ah
Airbus A400M waa diyaarad gaadiidka militariga loogu talagalay by Airbus oo isu waxaana la filayaa inuu soo galo adeeg u dhexeeya 20,123 iyo 20,144. Waxaa hadda gacanta ku siddeed koobiyada 174 dal oo kala duwan, Germany, France, Spain, United Kingdom, Turkey, Belgium, Luxembourg iyo Malaysia. South Africa ayaa markeeda la joojiyay ay si iyo Chile ma cusbooneysiiyo warqadda asalka ah ujeedadiisa. Ujeedadu waa in kabaan ama bedeli maraakiibta jira, gabowga, ka kooban American C-130 Hercules ama C-160 Transall Franco-German.
Direction ee wareeg ah propellers ah
faahfaahsan A waa mid aad u muhiim ah: DBE ee fikradda (Down u dhaxaysa matoorada), in uu yahay in la yidhaahdo "daab hoos u dhaxeeya matoorada ee." On garabka kasta qeybtii, jihada of wareeg ah propellers ee labada matoorada waxaa beddeli, dhaqdhaqaaqa, midhona ee garbaha ka dhaca inta u dhaxaysa matoorada ee ku saabsan dhexe ee garabka, si socodka neefta garbaha waxaa ku urursan.
qaabeynta waxa loo doortay horayn si loo yareeyo kaqabto in dhacdaa case of engine failure, gaar ahaan of motor dibadda (taas oo waa wax caadi ah oo ku saabsan diyaarad military ee tiyaatarka ah hawlgalka). Laakiin waxaa kale oo ay leedahay saameynta badan, dadaal yar garabka, halkaasoo ay macquul tahay qaab-dhismeedka gargaarka. Intaa waxaa dheer, xajmiga, miyigii oo la dhimay tan iyo markii la saxo Yaw waxaa laga yaabaa in yar haddii ay dhacdo of engine failure, yaraynta jiita. Labadan muuqaalada ogolaanayaan awoodda kala duwan oo ka weyn ama siday culus lacagta la mid ah carburant50 payload ah. Afarta matoorada waa run ahaantii isku, laakiin laba matoorada waxaa qalabaysan marsho ah dib jihada of wareeg ah rafaasad ah.
Si ka duwan ka-An 70 iyo An-22, A400M ma isticmaali propellers, qaas weyn ee engine Ruush-Yukreeniyaan, faa'iidooyinka aerodynamic waxaa mowjadda by miisaanka iyo kakanaanta sare. (Source Wikipedia)